ငြိမ်းချမ်းအေး – ချစ်သူများနေ့ကိုကြိုဆိုကြရအောင် | MoeMaKa Burmese News & Media
တတိယအချက် သမီးရည်းစား အိမ်ထောင်မတိုင်မီ လိင်ဆက်ဆံမှု ကိစ္စကို မလိုလားတဲ့ အချက်ဟာလည်း သဘာဝ မကျပါ။ တရားဝင် လိင်ဆက်ဆံခွင့်အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက် (ဥပမာ – ၁၆ နှစ်၊ ၁၈ နှစ် စသဖြင့်) ပြည့်မီရင် လူငယ်ချင်း ဘာသာဘာဝ နှစ်ဦးသဘာတူ လိင်ဆက်ဆံလိုတာဟာ လူသားရဲ့ သဘာဝစရိုက်သာဖြစ်လို့ ဒါကိုသွား အဓမ္မတားလို့ မရသလို၊ အပြစ်တင်ချင်လို့လည်း မဖြစ်ပါ။ မိန်းကလေးများ အနိုင့်အထက် မကျင့်ခံရဖို့၊ နှစ်ဦးသဘောတူ စစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်စေဖို့ပဲလိုပါတယ်။ ဒီအတွက် အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ လိင်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာဆက်စပ် မှန်ကန်တဲ့ ဥပဒေတွေ လူတိုင်းအတွက် ဆူကြုံနိမ့်မြင့် မရွေး တပြေးညီ ကျင့်သုံး ကာကွယ်ပေးရပါမယ်။
သမားရိုးကျ အိမ်ထောင်မှုထုံး “ကာမပိုင်” ဆိုတဲ့ အယူအဆအစွဲကိုလည်း ချွတ်ရပါမယ်။ အိမ်ထောင်ပြုရုံနဲ့ သူတပါး တဦး တယောက်ရဲ့ ကာမကို ပစ္စည်းတခု ဝယ်သလို ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်မသွားပါ။ တရားဝင် လက်ထပ်ပြီး ဆန္ဒမရှိပါက ကာမ ကို မပေးဘဲ ငြင်းဆန်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ကာမ ဆက်ဆံခြင်း ဆိုတာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပေါင်းစည်းမှုက အပေါ်ယံပါ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စပ်ယှက်မှုက အဓိကပါ။ ဒါကြောင့် နှစ်ဦးသဘော အလိုတူ မျှတ ချစ်ကြည် သာယာ မှုကနေ စတင် အရင်းတည်ရပါတယ်။ မဟုတ်ရင် လင်မယားဆိုလည်း အဓမ္မပြုကျင့်မှု မြောက်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း အိမ်ထောင်မှုပြုခြင်း အမှုမှာ ကာမ ကို ရယူလိုမှုကလည်း အဓိက မကျပါ။ လောကဓံ ကို နှစ်ဦးသား အတူတကွ ရင်ဆိုင် ဖြတ်သန်းပြီး ဘဝတခု တည်ဆောက်လိုခြင်းပါ။ဒါပေမဲ့ ဒီ ကာမပိုင် အယူအဆ ကြီးစိုးနေမှုကြောင့် မဟာဖိုဝါဒီ ယောက်ျားများ အိမ်ထောင်ပြုရာမှာ ပစ္စည်းဝယ်လိုသလိုပဲ အသစ်ပဲလိုချင်တယ် ဆိုတဲ့ အစွဲစိတ်က မသိစိတ်မှာ မတရား ကြီးစိုး ကိန်းအောင်းနေတယ်။ အမျိုးသမီးကို လူသားတယောက်ထက် ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတခုလို၊ လိင်ကျွန်လို နှိမ့်ချ ဆက်ဆံလိုကြတယ်။ ဒီ ကာမပိုင်ဆိုတဲ့ အစွဲကြောင့် တိုင်းပြည်မှာ ဇနီးမယား အမျိုးသမီးများ တရားဝင် ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ အလိုမတူ မုဒိမ်းကျင့်ခံနေရရှာတယ်။
ဒါတွေအပြင် တိုင်းပြည်မှာ ချစ်သူများနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ နောက်ခံဇာတ်လမ်းအသားကို ဖော်ထုတ်တင်ဆက်ရမယ့် အနေအထားတခုလည်း မြင်နေရပါတယ်။ ရှေးရောမခေတ်မှာ လူသားအခြေခံ အခွင့်အရေး ချစ်မှုရေးရာကိစ္စ၊ အိမ်ထောင်ပြုမှုကို အာဏာပြ တားမြစ်လိုသူတွေ ရှိခဲ့သလို အခု မျက်မှောက် ကျနော်တို့ဆီမှာလည်း လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်၊ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို ဖိနှိပ်ပြီး အိမ်ထောင်မှုအပြုအတွက် ဥပဒေကန့်သတ်ချက် တင်းကျပ်လိုသူတွေ ရှိနေပါတယ်၊ တရားဝင် ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာတို့ရဲ့ နဂိုရှိရင်းကိုက ခေတ်မီ (၂၁) ရာစုတန်းဝင် ပြီးဖြစ်တဲ့ လွတ်လပ်ပြီး ဘုန်းကြီး၊ ဘုရားကျောင်းတော်လောင်းရိပ်အောက်ကင်းတဲ့ ဘာသာတရား ထုံးစံမပါတဲ့ လက်ထပ်ဓလေ့ကို ကာကွယ်ဖို့ရာ လူငယ်များချစ်ခြင်းကို အသက်စွန့် အသိအမှတ်ပြုပေးခဲ့တဲ့ စိန့်ဗလင်တိုင်းရဲ့ ရပ်တည်မှုတရားကို ထုတ်ဖော် မဖြစ်မနေ ဂုဏ်ပြုရမယ့် အချိန်ကလည်း ဝမ်းနည်းဖွယ် ရောက်လို့နေပါပြီ။ဒါအပြင့် တဖက်စွန်းရောက် အမျိုးသား/ဘာသာ စိတ်ဓာတ်တွေ ရှေ့တန်းတင်လိုသူများနဲ့ နိုင်ငံရေးအောက်လုံးအနေနဲ့ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေးအသုံးချလိုသူ လူတစုကြောင့် ဘာသာ၊ လူမျိုးစုံ အစဉ်အဆက် မှီတင်းနေထိုင်နေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက်သူ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း အမုန်းတရားတွေပွား၊ ပဋိပက္ခတွေများခဲ့တဲ့ ဒါတွေလျော့နည်းပပျောက်ဖို့ ချစ်သူများနေ့ရဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေ ထွန်းကားဖို့လည်း လိုနေပါတယ်။
3 Responses to ငြိမ်းချမ်းအေး – ချစ်သူများနေ့ကိုကြိုဆိုကြရအောင်
Catwoman on February 14, 2016 at 9:54 am
Remember there ll be many consequences such as single mothers. Kids out of wedlock, many social and psychological issues as well as financial issues. That s what I see here in the US. Patients have many many problems. In the end living by five precepts and eight fold noble path is the best. We re very lucky to learn Buddha s teachings. Everyone has their own opinions and everyone wants to look likeaknow it all. In the end we re the creator of our own kamma.
Myint Wai on February 16, 2016 at 7:55 am
Catwoman on February 17, 2016 at 8:19 am
Nothing is funny about Buddha s teachings or people who haveabunch of social problems. You re funny because you re ignorant